स्याब्बास सरकार भनाै‌ : नकारात्मक मात्र नबनाैं
आज नेपालीका लागि गौरवपूर्ण दिन हो । ऐतिहासिक दिन हो । आजबाट नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल खुल्ला दिसामुक्त देश बनेको छ ।
कतिपय मानिसलाई यो कुरा पचेको छैन । उनीहरु यति नकारात्मक छन् कि खुला दिसामुक्त भनेको के हो भन्ने तथ्य नबुझी आफ्नो देशको उपलब्धीलाई खिल्ली उडाउँछन् ।
देश खुला दिसामुक्त हुनु भनेको हरेक नेपालीको पहुँचमा शौचालय हुनु हो । यदि कोही शौचालय जाँदैन र बाटैमा शौच गर्छ भने असामाजिक काम हो । आज मात्रै कतिपय नकारात्मक मानिसहरुले काठमाडौंको गल्ली तथा खुला ठाउँमा शौच गरिरहेका मानिसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेका छन् । ती मानिसको घरमा शौचालय छैन भने सार्वजनिक शौचालय गए हुँदैन र ?
हो, नेपाल शतप्रतिशत खुला दिसामुक्त भइसकेको छैन । शतप्रतिशत भनेको कहीँ पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन । विश्वको अति नै सफा भनिएको देशमा पनि फोहोर हुन्छ । युरोप अमेरिकामा पनि ट्रेकिङ र हाइकिङ जाँदा खुला दिसा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
खुला दिसामुक्त हुनु भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको न्यूनतम मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको हो । खुला दिसामुक्त भन्नासाथ विश्वको सबैभन्दा सफा देश सिंगापुरजस्तो नेपाल भयो भनिएको होइन ।
खुला दिसामुक्त घोषित हुनु भनेको नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । यति ठूलो उपलब्धीमा गर्व गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको नराम्रो मात्र देख्ने राम्रो केही नदेख्नेहरुको आँखा मात्र होइन दिमाग पनि उपचार गराए हुन्छ ।
वास्तवमा नेपालले दिमागी सरसफाई अभियान पनि चलाउनुपर्छ । नकारात्मक मात्रै देख्ने फोहोर दिमाग पनि विकासको वाधक हो । देशभित्र आशा र उत्साह बढाउनुपर्छ, निरासा होइन ।
नेपाल विश्वकै विपन्न मध्येको देश हो तरसरसफाईमा विश्वका अब्बल देशहरुको लहरमा उभिएको छ । यो उपलब्धीमा गर्व मान्न छाडेर कसले बाटोमा शौच गर्दैछ भनी फोटो खिच्न हिँड्नेहरु नकारात्मक पात्र हुन् ।
देशको कूल ५६ लाख ६० हजार भन्दा धेरै घरमा शौचालय बनिसकेको छ । देशका ७७ वटै जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त भइसकेको छ । ठोस कार्ययोजना बनाएर यो अवस्था हासिल गर्न नेपाललाई करिब आठ वर्ष लाग्यो ।
आज गाउँगाउँमा शौचालय बनेको छ । हरेक विद्यालयमा शौचालय बनेको छ । कुनै घरमा शौचालय छैन भने त्यो परिवारका स्कुल जाने बालबालिकाले घरमा शौचालय बनाउनुपर्.....यो भनेर अभिभावकसँग माग गर्छन् । यो चेतना र जागरणलाई सामान्य भन्न कसरी मिल्छ ?
दक्षिण एसियामा खुला दिसामुक्त देश नेपाल मात्र भएको छ । भारतले यो वर्ष खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने भनेको छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न एजेन्सीहरुले मानिरहेका छैनन् । खुला दिसामुक्तको घोषणा कुनै पनि देशको सरकारले आफू खुसी गरेर हुँदैन । यसका लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अनुगमनमा त्यो देशले सरसफाईको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
आज नेपाल खुला दिसामुक्त बनेको छ र यो काममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै नै मेहेनत गरेका छन् । संयोगको कुरा हो– ०६८ मा कास्कीलाई पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री थिए– झलनाथ खनाल । आज समग्र देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री छन्– केपी शर्मा ओली । उनीहरु दुवै एकै पार्टीका हुन् ।
कास्कीलाइ खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको बेला नेपालमा ६२ प्रतिशत जनतामा मात्र शौचालयको पहुँच थियो । आज शतप्रतिशत नेपालीको पहुँचमा शौचालय छ ।
नेपाल खुला दिसामुक्त बन्ने यात्रामा ठूलो बाधक बनेको थियो भारतीय नाकावन्दी । नाकावन्दीका कारण नेपालमा निर्माण सामग्री आउन सकेन । खुला दिसामुक्त बनाउन शौचालय चाहिन्छ । सर्वत्र शौचालय बनाउन निर्माण सामग्रीको अभाव भयो । त्यसैले नेपाल पछि पर्यो ।
एउटा उल्लेखनीय तथ्य के भने ०७२ को भूकम्पबाट भत्किएका शौचालय बनाउन सरकारले पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो ।
सन् २०१९ को आजको दिन नेपालले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेरै छाडेको छ ।
खुला दिसामुक्त घोषणा हुनु भनेको अहिलेसम्म जसले खुला शौच गरिरहेको छ उसलाई नगर्नु भनेको पनि हो । घरमा शौचालय ताला लगाएर राख्ने अनि बारी तथा खुला चौरमा जानेलाई त्यसो नगर पनि भनेको हो ।
खुला दिसामुक्त घोषणाले हरेक नेपालीलाई सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश हो– अब कहिल्यै खुला दिसा नगर्नु । आफ्नो घर, टोल, गाउँ, जिल्ला र देश सफा राख्न हरेक नागरिकको योगदान हुनु पर्दैन र ?
यो उपलब्धीका लागि वर्तमान सरकारलाई स्याब्बास् भन्नुपर्छ । खुला दिसामुक्त बनाउन देशभरीका गाउँगाउँका संघसंस्थाहरुले ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरुलाई पनि स्याब्बास् भन्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुलाई स्याब्बास् भन्नुपर्छ ।
सबैले बुझौं– असल कामलाई स्याब्बास् भन्न नसक्नेसँग खराब काम औंल्याउने नैतिक आधार हुँदैन ।
Amar shrestha लेख्नुहुन्छ १५ असोज, २०७६ ६:२१ pm
Dherai ramro kam ho sarkar ko salam x sarkar
रोशनीले कुरा फेर्दा महरा प्रकरण रहस्यमय (भिडियाे सहित)
शिक्षामा लागू गर्नैपर्ने प्रावधान, खारेज गर्नैपर्ने एउटा ऐन
३० असोज, २०७६
चीन–भारत : न मित्र न शत्रु
कुरा बुझौं, यसकारण गरिँदैछ चिनियाँ राष्ट्रपतिको भव्य स्वागत
'चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेपछि अरू देशकाे आँखामा पनि नेपाल पर्छ'
धराने रेलको कुरा
१६ असोज, २०७६